Isika dia manome lanja Product Quality sy ny fanavaozana
Application Tilmicosin phosphate dia macrolide antibiotika zava-mahadomelina, dia ny fanavaozana ny tylosin phosphate vokatra indrindra ampiasaina ho an'ny fitsaboina momba ny biby. Ny harmfulless, sisa afaka, amin'ny fiarovana mafy sy ny effection. Izany no tena nanasitrana ny aretina taovam-pisefoana izay ateraky ny mycoplasma, biby infective pleuropneumonia fa vokatry ny actinobacillus sy ny pasteurella multocida sy ny tratrany aretina ny lactational biby. Ny zava-mahadomelina vokany dia 4 ka hatramin'ny 8, noho ny tylosin phosphate. Mandritra izany fotoana izany, izany H ...
Products manerana izao tontolo izao, Thai-tany, Alemaina, Brzail sy ny sisa.
R & D sy Certificate ny Regis-tration - Tilmicosin phosphate.
Safety penitra dia ambony kokoa noho ny fenitra-pirenena.
Amin'ny tsy miankina sy ny teknolojia developpment foibe fikarohana.
Shandong Jiulong Hisince fanafody Co., Ltd.
Tena Ilaina ny Antibacterials Of Veterinary ny Zava-mahadomelina
Ny iray dia hoe efa nandray anjara antibiotika fitsaboina momba ny biby mihoatra noho ny be dia be. Ny firongatry sy ny fampiasana ny antibiotika dia fahagagana teo amin'ny tantaran'ny olombelona ny fitsaboana, dia tsy maty vonoina manao anjara ny olombelona fahasalamana.
Ny Fianarana Of Enterprise Kolontsaina
Ny marainan'ny faha-14 Aprily, 2018, ny orinasa nikarakara mpiasa rehetra mba hianatra kolontsaina orinasa fanofanana, rehefa afaka roa ora sy sasany fianarana, dia soa ary nahazo be dia be.
Ceftiofur hydrochloride Powder , Ceftiofur hydrochloride Miaraka Gmp , Ceftiofur hydrochloride 103980-44-5 , Tilmicosin 25% Oral Solution, Ceftiofur Injection For Animal, Ceftiofur Antibiotic,